आज हामी के thymus (thymus) छ बारेमा भन्नेछु। यसबाहेक, तपाईं भने शरीर कसरी फलाम सिक्न हुनेछ, के कार्यहरु प्रदर्शन गर्दै छन् र यो कहाँ स्थित छ।
Thymus (thymus) - मान्छे lymphopoiesis को एक शरीर, साथै धेरै जनावर। यो टी-कक्षहरूको प्रतिरक्षाविज्ञानी "प्रशिक्षण", परिपक्वता र भिन्नता हुन्छ प्रतिरक्षा प्रणाली को।
Thymus (thymus) - एक lobed सतह संग एक pinkish-खैरो रंग भएको एउटा नरम स्थिरता संग आकार शरीर मा एक सानो छ। नवजात शिशुलाई यसको आयाम लगभग4सेमी चौडा छन्,5- लम्बाइ र6मा - मोटाइ मा। छोराछोरीको thymus बारेमा 15-17 ग्राम को एक वजन हुन सक्छ।
शरीर को उचाइ शुरुवात गर्न को विस्तार यौवन अवस्था छ। यो अवधिमा यसको आयाम पुग्न यस्तो अधिकतम मान: चौडाइ र 16 मा 7.5 सेमी सम्म - लम्बाइमा। यसको ठूलो 20-38 ग्राम हुन सक्छ।
उमेर संग thymus (thymus) atrophy undergo हुन सक्छ, र बुढेसकालमा वरपरको फैटी ऊतक देखि भिन्न छैन। 75 वर्ष, एक शरीर जस्तै को आम मात्र6ग्राम छ। साथै, यो यसको रंग हराउछ। यो बोसो कक्षहरू र stroma यसको शेयर मा वृद्धि को कारण हुन्छ। तसर्थ, thymus ग्रंथि थप पहेंलो हुन्छ।
को thymus ग्रंथि: मानव शरीर मा स्थान
को thymus को छाती माथि छ। उनले छाती पछि लुकाउने छ। शरीर को 4th costal उपास्थि को स्तरमा sternum अतिरिक्त आसन्न, साथै छाला अगाडि। उसलाई पछि जो पल्मोनरी धमनी र महाधमनी, बायाँ brachiocephalic भियना र aortic कट्टर को प्रारम्भिक भागहरु र कवर pericardium, माथिल्लो क्षेत्र छुनुहोस्। दुवै पक्षले त्यहाँ mediastinal pleura छ।
शरीर को संरचना
अब तपाईं के thymus थाहा छ। यो शरीर संरचना, अब हामी विचार गर्नुहोस्। मानिसहरूलाई, यो आसन्न आपसमा spliced वा राम्ररी, 2-lobes हुन्छन्। को thymus तल्लो भाग व्यापक छ, र शीर्ष, त्यसको विपरीत, धेरै संकीर्ण छ। शरीर को माथिल्लो पोल दुई-pronged काँटा को कडा reminiscent छ। वास्तवमा, यसैले यसको नाम।
बिल्कुल सम्पूर्ण शरीर बाक्लो ऊतक (संयोजी) बनेको छ जो एक विशेष दानाको, ढाकिएको छ। गहिराई मा उनको जम्पर देखि विदा। तिनीहरूले स्लाइस मा thymus विभाजन।
लसीका, रगत आपूर्ति र innervation
अंग रगत आपूर्ति गर्ने aortic कट्टर को thymic शाखा, thoracic धमनी (आन्तरिक), र brachiocephalic ट्रंक र तल्लो र माथिल्लो थाइरोइड धमनिहरु को शाखा बाट लिइएको हो। शिरापरक outflow सन्दर्भमा, यो शाखा brachiocephalic र आन्तरिक thoracic नसाहरु मार्फत बाहिर छ।
को लसीका को thymus र लसीका parasternal tracheobronchial प्रतान टाढा बग्छ।
Innervated thymus (यो शरीर को समारोह प्रतिनिधित्व गरिनेछ hereinafter) बायाँ र दायाँ शाखा को vagus स्नायु, र सहानुभूति, जो stellate सहानुभूति छलछामको गाँठो र माथिल्लो thoracic ट्रंक फीड शरीर जहाजहरु आसपास ताकत plexuses बनेको छन् बाट Originate।
को ऊतक को संरचना
Thymic stroma सम्पूर्ण epithelium हुन्छन्। Diverticula तेस्रो देखि Originate प्रेमी कट्टर, त्यसपछि पिछला mediastinum मा अङ्कुराउन। केही अवस्थामा, अंग को stroma थप किसिमहरु द्वारा गठन गरिएको छ (branchial arches को 4th जोडी देखि)।
Lymphocytes जिगर अंग माईग्रेट कि hematopoietic स्टेम सेल देखि व्युत्पन्न छन्। सामान्यतया, यो पहिलो, दोस्रो trimester हुन्छ।
को thymus ऊतक मा पहिलो स्थानमा विभिन्न रक्त को proliferation छ। चाँडै हुनत यसको समारोह टी-lymphocytes को गठन कम छ। माथि उल्लेख रूप मा, thymus एक lobed संरचना छ। मस्तिष्क lobes को Tissues मा भेद र Cortex। उत्तरार्द्ध को बाह्य मा स्थित र गाढा स्थान जस्तो देखिन्छ छ। पनि Cortex त्यहाँ रगत capillaries र arterioles छन्।
यसलाई विशेष सक्रिय घटक कक्षहरू comprises कि उल्लेख गर्नुपर्छ:
hematopoietic lymphoid वंश (अर्थात्, परिपक्व टी-lymphocytes);
haematopoietic बृहतभक्षककोशिका श्रृंखला (interdigitiruyuschie र dendritic कक्षहरू, मैक्रोफेज को विशिष्ट)।
साथै, Cortex सहित उपकला मूल, को कक्षहरू समावेश गर्दछ:
stellate (- thymosin, thymopoietin र अन्य विकास प्रक्रिया, भिन्नता र टी कक्षहरूको परिपक्वता र प्रतिरक्षा प्रणाली को पाको कक्षहरूको गतिविधि विनियमन thymus घुलनशील हर्मोन स्राव)।
( "कंकाल" ऊतक गठन गरिएको छ तिनीहरूलाई कारण र पनि gematotimusny बाधा गठन गरिएको छ) समर्थन कक्षहरू;
kletki जहाँ lymphocytes विकास intussusception, संग "नानी"।
यो दानाको शरीर अन्तर्गत प्रबल होना टी lymphoblasts (fissile)। थप गहिरो टी lymphocytes, मस्तिष्क पदार्थ गर्न बिस्तारै सर्न जो maturing स्थित। यो आफ्नो परिपक्वता लगभग 20 दिन लाग्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यो अवधिमा गठन र सङ्केतन टी-सेल रिसेप्टर जीन को rearrangement छ। कि पछि तिनीहरू चयन (सकारात्मक) undergo। अर्को शब्दमा, उपकला कक्षहरू संग अन्तरक्रिया मात्र "उपयुक्त" lymphocytes, सह-रिसेप्टर्स र TCR चयन गर्न थाल्छन्।
अर्को चरण नकारात्मक lymphocytes को चयन छ। यसलाई मस्तिष्क तत्व संग सिमाना सिधै चल्छ। monocytic मूल को कक्षहरू निकायको antigens अन्तरक्रिया सक्षम छन् जो चयन कक्षहरू, गर्न थालेका छन्, र त्यसपछि आफ्नो apoptosis सुरु गर्नुहोस्।
को medulla मा ज्यादातर समावेश टी-lymphocytes (पकने) याद गर्नुहोस्। यो तिनीहरूले रगत छोडेर शरीर बसोबास यहाँ हो। पदार्थ को सेलुलर संरचना उपकला कक्षहरू र मैक्रोफेज समर्थन, प्रस्तुत छ stellate। साथै, त्यहाँ Hassall गरेको corpuscles र efferent लसीका जहाजहरु छन्।
हामी किन यो शरीर चाहिन्छ र के काम यो शरीर मा कार्य? यस्तो timalin, thymosin, thymopoietin, thymic humoral कारक, इन्सुलिन-जस्तो वृद्धि कारक-1 रूपमा Thymic हर्मोन polypeptides छन्। एक व्यक्ति hypothymism अवलोकन गरिनेछ भने, त्यो रगत कम एक चिह्नित गिरावट को फलस्वरूप टी-lymphocytes संख्या प्रतिरक्षा छ।
यसरी, यो सुरक्षित thymus मा टी lymphocytes कक्षहरू विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्ने विदेशी शरीर बन्ने (कारण विभिन्न घाइते गर्न) यस्तो गुण प्राप्त गर्ने उल्लेख गर्न सकिन्छ। को thymus ग्रंथि को मुख्य कार्य को प्रारम्भिक हानि व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रणाली को बिग्रेको कामकाज परिणाम हुन सक्छ।
उपकला कक्षहरू को thymus lobes को अंग भन्नुभयो lymphocytes को परिवर्तन regulates एक हर्मोन उत्पादन। केही अवस्थामा, वयस्क जीवनको मा प्रतिरक्षा मा एक विशेष विभिन्नता हुन सक्छ। नियम, यो thymus मा रोग परिवर्तन र अन्य lymphoid अंगहरु कारण हो। यो विचलन राम्रो सर्जरी मा एनेस्थेसिया समयमा रोगी को अचानक मृत्युको कारण हुन सक्छ।
विशेषज्ञहरु thymus मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को एक केन्द्रीय अंग हो भन्छन्।
Thymus हर्मोन र secretion को adrenal Cortex को तथाकथित हर्मोन अर्थात्, glucocorticoids द्वारा नियमन छ। साथै, शरीर जिम्मेवार इन्टरफेरोन, lymphokines र इन्टरल्युकिनको को समारोह को लागि, प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न कक्षहरू उत्पादित।
सम्भव thymus रोग
यो शरीर जस्तै विचलन गर्न subjected हुन सक्छ:
Di Dzhorzhi सिंड्रोम;
myasthenia (एक स्वतन्त्र रोग रूपमा विकास, तर अक्सर thymoma संग सम्बन्धित छ)।
यसबाहेक, सचित्र शरीर मा जस्तै ट्यूमर सक्छ:
thymoma, thymic एक उपकला सेल देखि गठन;
टी-सेल लिंफोमा, को lymphocytes, र आफ्नो precursors देखि उदीयमान;
कहिलेकाहीं thymus मा प्राथमिक स्थानीयकरण छ जो र mediastinum मा एक विशाल घुसपैठ को रूप मा पहिचान गर्दै पूर्व-टी-lymphoblast ट्यूमर लेकिमिया मा तात्कालिक परिवर्तन पछि;
दुर्लभ ट्यूमर (स्नायु र भास्कुलर मूल)।
यो पनि thymic ट्यूमर endocrine neoplasia प्रकार 1 को सिंड्रोम को एक प्रकटीकरण हुन सक्छ उल्लेख गर्नुपर्छ।
सर्वेक्षण लागि कसले सम्पर्क गर्न?
त्यहाँ घाउ को thymus मा उत्पन्न गर्ने एक शङ्काको छ भने, त्यसपछि तपाईं तुरुन्त इम्युनोलोजस्ट र ऑन्कोलॉजिस्ट भ्रमण गर्नुपर्छ। को एमआरआई डाटा, एक्स-रे र छाती को सीटी स्क्यान आधारित डाक्टर सही निदान रोगी राख्नु र उपचार (रूढिवादी वा शल्य चिकित्सा) गर्ने सल्लाह दिन्छन् गर्न सक्नुहुन्छ।
विचार - सामाग्री को विकास मा एक अपरिहार्य उपकरण
Kislovodsk, "किल्ला" (स्पा)। को अस्पताल गर्न पर्यटकहरु को समीक्षा
हटाउनु कसरी - थोपा नाक प्रयोग हुँदै? लोक उपचार र चिकित्सा अभ्यासहरू
Renault जन्तरको - नयाँ संसारको-प्रसिद्ध फ्रान्सेली कम्पनी को "अनुहार"
Talovskie कटोरे: विवरण र चासो अंक
समय सीमाको सिन्ड्रोम
'Nexium': प्रयोगको लागि निर्देशन
सूक्ष्मजीवहरु को चयन
भीडहरू को मनोविज्ञान
हाइपोलिपिडेमिक ड्रग "क्रिस्टल": प्रयोगको लागि निर्देशन
पिउन: "एशिया मिक्स" - टोलीमा। Eldiyar Kenensarov, Sitora Farmonova Akim Karasaev, Daniyar Makashev
इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको, troupe: बायाँ तर्फ (नाटक र कमेडी) मा थिएटर